Fiitamiinada Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha Fiitamiinada Shiinaha
Waxyaabaha Daryeelka Shakhsi ahaaneed
Kojic Acid Diblomaasiyadda
Taxanaha PVP K
Poly (Methylvinylether / Maleic Acid) Cusbada isku dhafan
Xakamaynta / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Waxyaabaha Kale ee Firfircoon
Laktose goos goos ah
Buufiyo Laktose qalajinta
Solvents / Intermediates
Cirbadda Tetra-ka Sida Zinc Oxide Whisker
Xakamaynta / C10-30 Alkyl Acry ...
DL-Panthenol waa humectants weyn, oo leh qaab budo cad ah, oo lagu milmi karo biyaha, aalkolada, propylene glycol.DL-Panthenol waxaa sidoo kale loo yaqaanaa 'Proitamin B5', oo door muhiim ah ka ciyaareysa dheef-shiid kiimikaadka bani'aadamka. Yaraanta Vitamin B5 waxay sababi kartaa xanuuno badan oo maqaarka ah.DL-Panthenol waxaa lagu dhajiyaa ku dhowaad dhammaan noocyada diyaarinta qurxinta.DL-Panthenol waxay daryeeshaa timaha, maqaarka iyo ciddiyaha.Dadka maqaarka, DL-Panthenol waa cilad qoto dheer oo dhex dhexaad ah.DL-Panthenol waxay kicin kartaa koritaanka epithelium waxayna leedahay ah ...
DL-Panthenol 50% waa humectants weyn, waa midab la'aan midab jilicsan oo dareere huruud ah, ku milma biyaha, aalkolada, propylene glycol.DL-Panthenol waxaa sidoo kale loo yaqaanaa 'Proitamin B5', oo door muhiim ah ka qaata dheef-shiid kiimikaadka bani'aadamka. Faytamiin B5 wuxuu sababi karaa xanuuno badan oo maqaarka ah.DL-Panthenol waxaa lagu dhajiyaa ku dhowaad dhammaan noocyada isku diyaarinta qurxinta.DL-Panthenol waxay daryeeshaa timaha, maqaarka iyo ciddiyaha. Maqaarka, DL-Panthenol waa qoto dheer jilicsanaanta jirka. DL-Panthenol wuu kicin karaa gro ...
DL-Panthenol 75% waa humectants aad u weyn, waa mid aan midab lahayn si cirro leh dareeraha huruudda ah ee jilicsan, lagu milmi karo biyaha, aalkolada, propylene glycol.DL-Panthenol waxaa sidoo kale loo yaqaanaa 'Proitamin B5', oo door muhiim ah ka qaata dheef-shiid kiimikaadka bani'aadamka. Faytamiin B5 wuxuu sababi karaa xanuuno badan oo maqaarka ah.DL-Panthenol waxaa lagu dhajiyaa ku dhowaad dhammaan noocyada isku diyaarinta qurxinta.DL-Panthenol waxay daryeeshaa timaha, maqaarka iyo ciddiyaha. Maqaarka, DL-Panthenol waa qoto dheer jilicsanaanta jirka. DL-Panthenol wuu kicin karaa gro ...
D-Panthenol waa dareeraha dareeraha dareeraha ah ee pantothenic acid waxaana si gaar ah loogu sameeyay codsiyada la mariyo. Aad ugu milma biyaha, si fudud ugu milma aalkolada, ku milma glycerol, wax yar ku milma ether, saliidaha khudradda, saliidaha macdanta iyo dufanka. Halbeegyada Farsamada Muhiimka ah: Aqoonsiga A wuxuu la jaan qaadayaa Aqoonsiga USP B wuxuu u egyahay Aqoonsiga USP C wuxuu u egyahay muuqaalka USP midab la'aan, Viscous iyo dareere saafi ah (Anhydrous based) 98.0% ~ 102.0% Speci ...
D-Panthenol 75% waa dheecaan dareeraha dareeraha ah ee pantothenic acid waxaana si khaas ah loogu sameeyay arjiga maadada. Aad ugu milma biyaha, si fudud ugu milma aalkolada, ku milma glycerol, wax yar ku milma eterka, ku milmin saliidaha khudradda, saliidaha macdanta iyo dufanka . Halbeegyada Farsamada ee Muhiimka ah: Muuqaalka Muuqaalka midab la’aan, Muuqaal iyo dareere cad oo Aqoonsiga Falcelinta Wanaagsan (HPLC) 75.0 ~ 78.5% Biyaha (Karl Fischer) Wax aan ka badnayn 0.1% Wareeg Gaara oo Gaara + 29 ° ~ + 31.5 ° Am ...
D-Calcium Pantothenate waa cusbada kaalshiyamka ah ee fitamiinka B5 ee biyaha ku milma, meel walbana laga helo dhirta iyo unugyada xayawaanka ee leh antioxidant antioxidant. Pentothenate waa qayb ka mid ah Coenzyme A iyo qayb ka mid ah fitamiin B2. Vitamin B5 waa cunsur koritaan waxayna muhiim u tahay shaqooyinka kala duwan ee dheef-shiid kiimikaadka, oo ay ku jiraan dheef-shiid kiimikaadka, borotiinnada, iyo asiidh dufanka leh. Fiitamiinkan ayaa sidoo kale ku lug leh isku-dhafka dufanka kolestaroolka, neurotransmitters, hormoonnada steroid, iyo hemoglo ...
Ascorbyl Tetraisopalmitate, oo sidoo kale loo yaqaan Tetrahexyldecy Ascorbate, waa maaddo laga soo qaatay fitamiin C iyo isopalmitic acid. Saamaynta alaabtu waxay la mid tahay ta fitamiin C, tan ugu muhiimsan waxay awood u leedahay inay u shaqeyso sidii antioxidant. Ascorbyl Tetraisopalmitate wuxuu yareeyaa soosaarida wakiilada oksidheeyaha, kuwaas oo gacan ka geysta dhaawaca unugyada kadib soo-gaadhista halista UV ama kiimikada. Iyo, maqaarka muuqaal muuqaal ah ...
Biotin oo sidoo kale loo yaqaan 'D-Biotin, Vitamin H, Vitamin B7, waa cadaan ama ku dhowaad cad, budada crystaline ama kiristaalo aan midab lahayn, waxyar aad u yar milmi kara biyaha, aalkolada, wax aan lagu daadin karin acetone. Waxay ku milmaysaa xalalka milanka ee Alkali Hydroxides. Halbeegyada Farsamooyinka Muhiimka ah Muuqaalka Cad ama cad-cad Aqoonsiga budada (A, B, C) Waxay u dhigantaa USP Assay 97.5% ~ 100.5% Wasakhda Shaqsi ahaaneed: in aan ka badnayn 1.0% Wadarta Ciladaha: kama badna 2.0% Wareeg gaar ah + 89 ° ~ + 93 ° Resi ...
Coenzyme Q10 waxay ku lug leedahay qayb ka mid ah mitochondria ee soosaarka tamarta ee unugyada. Waxay sidoo kale leedahay saameyn antioxidant ah, oo si ballaaran loogu adeegsado jirka, farmashiyaha, is qurxinta iyo ilaalinta caafimaadka.Waa budada madoow ee jaalaha ah ama khafiifka ah, ur aan lahayn, dhadhan lahayn, oo si fudud ugu milmi kara chloroform, benzene iyo carbon tetrachloride; lagu milmi karo acetone, aether, petrol ehter; wax yar ku milma ethanol; aan lagu milmi karin biyaha ama maadada methanol.Waxaa loo badali doonaa walxaha guduudan ee nalka, stabl ...
Magnesium Ascorbyl Phosphate waa noocyo kala duwan oo fitamiin C ah (L-Ascorbic acid mono-dihydrogen fosfate magnesium salt) oo aan hoos u dhigin qaaciidooyinka ay kujiraan biyaha .Badeecooyinka daryeelka maqaarka, Magnesium Ascorbyl Phosphate waxaa loo isticmaalaa ilaalinta UV iyo hagaajinta, soosaarka kolajka, Iftiinka maqaarka iyo iftiiminta, iyo kahortaga infakshanka sidoo kale waa antioxidant awood leh.Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay wakiilka sakiin caddeeya ee aan xanaaqa lahayn ee ka hortaga unugyada maqaarka inuu soo saaro melanin iyo iftiin ...
Sodium Ascorbyl Phosphate waxay ka dhalataa fiitamiin C, fitamiin C wuxuu ku saleysan yahay sayniska casriga ah iyo teknolojiyadda loogu talagalay ka shaqeynta alaabta ceyriinka ah ee la sameeyay iyadoo la adeegsanayo sheygan, ha ahaato hadal ama maqaarka oo jirka loo marinayo, wuxuu si dhakhso leh ugu milmi karaa fosfatase si uu u helo fiitamiin C, fiitamiin. C wuxuu ciyaaraa shaqooyin jireed iyo kuwa kiimikaad oo gaar ah Sodium Phosphate Vitamin C Vitamin C wuxuu leeyahay dhamaan waxtarka labadaba. Faytamiin C sidoo kale wuxuu ka adkaadaa xasaasiga u ah iftiinka, kuleylka iyo ion birta, si fudud u okseysii sh